Qaban qaabada aaska wariyaashii shalay ku dhintay qaraxyadii Muqdisho oo saakay Muqdisho ka socda
Updated About:246 days ago 4
Qaban qaabada aaska saxafiyiintii ku geeriyootay qaraxyadii shalay galab Muqdisho ka dhacay ayaa saaka ka socota magaalada Muqdisho.
Wariyaasha shalay ku dhintay qaraxyadii shalay ayaa waxaa ka mid ah weriye C/sataar Daahir Sabriye oo ka shaqayn jiray Telefishinka qaranka iyo weriye Liibaan Cali Nuur oo isagana ahaa madaxa wararka ee warbaahinta qaranka, iyo C/raxmaan Yaasiin Cali oo ahaa agaasimihii Idaacada VOD sidoo kale waxaa goobta ku ay dhaawacyo kala duwan ka soo gaareen weriyeyaal kale oo ka shaqeeya warbaahinta qaranka iyo warbaahinta kale.
Waxaa saaka qeybo ka mid ah Muqdisho ka socda qaban qaabada aaska la doonayao in lagu aaso wariyaashii shalay ku geeriyooday qaraxyadii naxdinta lahaa, sida Midnimo.com uu u sheegay C/raxmaan Alcadaala oo warbaahinta Qaranka ka tirsan.
Somali says:	September 24, 2012 at 6:15 am	Waxaan fariin guud u diraya Ummadda somaaliyeed iyo dowladda usub.aniga waxaan dhihi lahaa dagaalkan guud ee Gobol gobalka looma baahna.Waxaa loo baahanyahay in la soo qabto tobanka nin ee shashka ama ganbada haweynka wadata oo madaxda u ah Alshabaab waa kuwa habeen iyo maalin u dhiga BAMKA Ummadda Soomaaliyeed waxay u dagaalamaan waa lacag raadis ee ma ahan diin waa qoladii Axadda, ka immaan dhulkii diinta lagu baran jiray,labaatankii sanoo la soo dhaafayna afka waa u xiranyahay xagee deentu joogtaa waaba tuug afxiran oo meelna ka shaqeyn ummadda xoolohooda rabo in uu ku noolaado isku qariyo diin, ninkastoo waalan ku soo xira BOMB..Aniga waxaan dhihi lahaa Jaalle Madaxweyne ummadda ka aruuri Hubka ay ku heestaan Guryohooda Magaalooyinka dowlada gacanta ku heyso (dil , xabis da’in , qofkii lagu arku hub isagoo heysto mudada loo qabto ka dib).
Reply	dr toxow says:	September 21, 2012 at 2:13 pm	innaa lilah wa innaa ilayhi rajicun
gacan ka gardaran oo islaamka iyo somali nacayb qabta ayaa geesatay falkan. marxuumintana waan ahlu janno
kuwii geystay naarta allaha ka buuxsho ayaga iyo kuwii soo qaban qaabiyey
Reply	absa haji says:	September 21, 2012 at 11:56 am	wariyaasha alla hau naxariisro ayaan leyahay
Reply	absa haji says:	September 21, 2012 at 11:54 am	alla hau naxariisto wariyaasha amin amin amin